I-Cobalt Digital ukusingatha i-RIST Protocol Demo e-IBC2018 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Cobalt Digital Yokwamukela I-RIST Protocol Demo ku-IBC2018
I-Cobalt Digital Yokwamukela I-RIST Protocol Demo ku-IBC2018
I-CHAMPAIGN, Ill. - Septhemba. 7, 2018 - Ngesikhathi sombukiso we-IBC2018 e-Amsterdam, I-Cobalt Digital (I-Stand 10.B44) izoba nomhlangano wokuboniswa kwe-Reliable Internet Stream Transport (RIST), eyenziwe yi-Video Services Foramu (VSF) ukuze isebenze njengokuchazwa kwemboni evamile ngomnikelo wevidiyo ophansi we-inthanethi. Uhlobo lokuqala lwencazelo entsha, i-RIST Simple Profil, selusondele, futhi amalungu eqembu le-VSF RIST asebenzisile I-Cobalt Digital Okokusebenza ukukhombisa umthetho olandelwayo olusebenzayo.
Amalungu e-Rist avela kuwo wonke umhlaba asakaza okuqukethwe kwi-inthanethi ebhange lezikhulu ze-Cobalt 9990-DEC-MPEG ekomkhulu leCobalt eChampaign, e-Illinois. Okuphakelayo okuholelekile kuhlanganiswe ku-mosaic kusetshenziswa i-Cobalt 9970-QS multiviewer futhi kushicilelwe ku-YouTube kusetshenziswa i-Cobalt 9223 encoder. Idemo izotholakala kuze kube yilapho i-IBC2018 show ivalwa ngoSept. 18.
"I-RIST yadalwa yiphaneli yezazi evela ezinkampanini eziningi, futhi isizuze kakhulu kulwazi lwayo oluhlangene," kusho uCiro Noronha, umqondisi wezobuchwepheshe, eCompression Division, e- I-Cobalt Digital. "I-RIST protocol iqinisekisa ukusebenzisana okuyisisekelo ngenkathi kuvumela inkampani ngayinye ukwenza. Ngenxa yalokhu, abasakazi abasaboshelwe emikhiqizweni yenkampani eyodwa futhi bangakwazi ukukhetha amadivaysi amahle kakhulu kuhlelo ngalunye. ”
Iphrothokholi entsha ye-RIST izodlala indima ebalulekile ekuletheni ukusebenzisana emikhiqizweni eminingi yamanje neyizayo eyenzelwe ukuxhasa i-RIST. Ukuxhaswa kwezimboni okuqinile kwe-RIST kusho ukukhetha okukhulu nokuvumelana nezimo zabasakazi, abazuza kulondolozo lwezindleko lokusebenzisa i-inthanethi ekuphakelweni kweminikelo nasekukhululekeni kokuxubana nokufanisa imikhiqizo evela kubathengisi abahlukahlukene njengoba kudingeka.
"I-Cobalt Digital ungumsekeli oqinile wezinga elivulekile, ”wengeza uNononha. "Silangazelele ukukhombisa i-IBC2018 inani elizolethwa yi-RIST Simple Profile nezinguqulo ezizayo ze-RIST ukusakaza izinhlelo zokusebenza."
Imininingwane eminingi ye-RIST Activity Group iyatholakala ku- vsf.tv/RIST.shtml. Ulwazi olungaphezulu mayelana I-Cobalt Digital futhi imikhiqizo yayo iyatholakala www.cobaltdigital.com.
Mayelana neForamu Yezinsizakalo Zevidiyo
Kusungulwe i-1997, i-Video Services Forum (VSF) yinhlangano yomhlaba wonke eyakhiwa abahlinzeki bensizakalo, abasebenzisi kanye nabakhiqizi abazinikele ekusebenzisaneni, amamethrikhi wekhwalithi kanye nemfundo yobuchwepheshe bezinkundla zokuxhumana ngevidiyo. Imisebenzi yale nhlangano ifaka ukuhlinzeka ngezinkundla zokuhlonza izingqinamba ezibandakanya ukuthuthukiswa, ubunjiniyela, ukufakwa, ukuhlolwa kanye nokunakekelwa kobuchwepheshe bezinkundla zokuxhumana ngevidiyo; ukushintshanisa imininingwane engeyona eyokuhweba ukukhuthaza ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bezinhlelo zokuxhumana zevidiyo kanye nokukhuthaza ukulungiswa kwezinkinga ezivamile embonini yamasevisi wevidiyo; futhi kugqugquzelwe ukusebenzisana ngokubamba iqhaza nasekuxhaseni ukuthuthukiswa kwamazinga yizindikimba zamazinga kazwelonke nakwamanye amazwe. Vakashela i-VSF online at vsf.tv/.
I-Cobalt Digital Inc. iklanywa futhi ikhiqize i-12G / 3G /HD/ Ukuguqulwa kwe-SD kanye ne-IP-based, i-terminal, ukuphithizela kwabantu kanye nobuchwepheshe be-multiviewer bendawo yokusakaza yethelevishini. Njengomlingani osungulayo kuhlelo lwe-openGear®, i-Cobalt inikezela ngohlu oluphelele lwezixazululo zamakhadi we-openGear wevidiyo nomsindo wezicelo ezifana nokuqapha ukulandela ukuthathwa kwamazwibela, ukukhiqizwa kwe-OB, ukulawulwa okuphezulu, HD ukukhiqizwa kwezindaba, ukuthuthwa kwesiginali, umsindo omkhulu, nokulungiswa kombala. I-Cobalt's Blue Box Group ™ yomugqa wama-interface wokuguqula amabhokisi we-interface futhi yenza lula ububanzi be-12G / 3G /HD/ SD kanye nokuguqulwa okusekwe ku-IP nemisebenzi yezokuhambisa isiginali. Izinkampani zokubonisa ezinezithombe eziningi zalenkampani zinika amandla ama-multiviewer esiteshini esifunwa kakhulu nezindawo zokusakaza ezikude. Kuthunyelwe ngenethiwekhi yomhlaba wonke yabathengisi, abahlanganisi bohlelo, nabanye ozakwethu, I-Cobalt Digital imikhiqizo ixhaswe ngewaranti yeminyaka emihlanu. Ukwaziswa okwengeziwe kuyatholakala ku www.cobaltdigital.com.
Xhumanisa ku-Word Doc: www.wallstcom.com/Cobalt/180907Cobalt.docx
Vakashela I-Cobalt Digital ku-IBC2018, Stand 10.B44
Yabelana ngakho ku-Twitter: twitter.com/intent/tw[Email protected]%20to%20host%20RIST%20Protocol%20demo%20at%20%23IBC2018%20-%20http://bit.ly/2NTsoSl%[Email protected]
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Digital Umnikelo I-IBC2018 I-Protocol Demo RIST Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo Iforamu Yezinsizakalo Zevidiyo VSF	2018-09-07
Ngaphambilini: IMultiDyne Iqinisa Ubukhona BaseNtshonalanga Melika e-US, Amehlo Ekunwetshwa Komhlaba Wonke Ngokuqokwa Kwezinhlelo Ezimbili
Olandelayo: Amagama aLawo Phil Myers Umqondisi Omkhulu we-IP Systems